China Hard elingenalutho Capsule ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I- kanzima i-capsule engenalutho yakhiwa ikepisi negobolondo le-capsule lomzimba elenziwe nge-gelatin yezokwelapha nezinto ezisizayo.Iyasetshenziswa kakhulu ukubamba izidakamizwa eziqinile nezingamanzi.Ukusizakala okukhulu kwaleli philisi ukuthi kungabamba izinhlobo ezahlukahlukene zezidakamizwa. Ngaphezu kwalokho, i-capsule ine-bioavailability enhle ngenxa yokuqedwa okusheshayo, okuthembekile nokuphephile kwe-capsule.
The Ukunambitheka kweminye imishanguzo akukuhle, kulula ukuhogela uqhoqhoqho obangelwe ukuhogela, noma emlonyeni kulula ukubola ngamathe; Ezinye izidakamizwa zingacasula i-esophagus ne-mucosa yesisu futhi zingadala nokusha. I-capsule elukhuni elingenalutho ayigcini ngokuvikela i-esophagus nepheshana lokuphefumula, kepha futhi yenza impahla yezidakamizwa ingabhujiswa.
Some Amanye amaphilisi ngama-capseric enteric, asebenza njengamagobolondo avikelayo okuphelezela umuthi yonke indlela eya emathunjini, okuvumela izithako ukuthi zibalekele ukuwohloka kwama-acid esiswini futhi zifinyelele emathunjini ngokuphepha ukuze zimuncwe ngempumelelo.
Others Amanye ngama-capsule akhishwa aqhubeka isikhathi eside, enza isikhathi sokukhishwa kwezithako zomuthi senze imiphumela yawo izinzile ngokwengeziwe.
1, ngoba i-capsule engenalutho inezici zokuqukethwe kwamanzi okuncane kakhulu, okulula ukuwaphula, kulula kakhulu ukuthambisa ukusonteka, ngakho-ke okuqukethwe kwamanzi kwemboni ye-capsule engenalutho kufanele ilawulwe phakathi kuka-12.5-17.5%;
2. Iziqukathi ezinamaphilisi kufanele zibekwe emashalofini, kude neWindows namapayipi ukuze zibesendaweni epholile nenomoya, futhi kugweme ukukhanya kwelanga futhi kusondele ekushiseni;
3, ayikwazi ukufakwa ngentando nokucindezela;
4. Isitsha sokupakisha kufanele sigcinwe sivaliwe ngaphambi kokusetshenziswa. Uma ivuliwe, sicela uthathe izinyathelo ezihambisana nokuvala inzalo, ngaphandle kwalokho kulula ukudala ukungcoliswa kwamagciwane.
5. Ukushisa kwempahla kufanele kugcinwe ku-15-25 ℃;
Umswakama ohlobene ugcinwa ku-35-65%;
6, ayikwazi ukugcinwa emazingeni aphezulu okushisa nomswakama, noma izothamba ngenxa yokunamathela kokushisa nokuguquguquka, futhi ayikwazi ukubekwa emazingeni okushisa iphansi kakhulu noma imvelo eyomile kakhulu, ngaphandle kwalokho i-capsule kulula ukuyikhiqiza into entekenteke;
Langaphambilini Okuphakelayo Ibanga Collagen
Olandelayo: I-Collagen Yezimboni